Yonke into malunga neTrestolone Acetate (MENT)
I-1.Yintoni iTrestolone Acetate (MENT)? 2. Isebenza njani iTrestolone Acetate?
I-3.Izixhobo zeTrestolone Acetate (MENT) I-4.Trestolone Acetate (MENT) umthamo
I-5.Trestolone Acetate (MENT) isiqingatha sobomi Umjikelezo we-6.Trestolone Acetate (MENT)
I-7.Trestolone Acetate (MENT) iziphumo I-8.Trestolone Acetate (MENT) yokusika
I-9.Trestolone Acetate (MENT) yobuninzi Izibonelelo ze10.Trestolone Acetate (MENT)
Uvavanyo lwe11.Trestolone Acetate (MENT) I-12.Trestolone Acetate (MENT) ipowder iyathengiswa
I-13.Indawo yokuthenga i-Trestolone Acetate (MENT) powder
I-1.Yintoni iTrestolone Acetate (MENT)?
I-Trestolone Acetate (MENT) I-CAS 6157-87-5, ekwabizwa ngokuba yi-a7 alpha-methyl-nortestosterone (i-MENT powder) yindawo enamandla yokwenziwa kwesoda eyomeleleyo kune testosterone. Isoftware isetyenziselwa ukwakha umzimba kunye noqeqesho lwamandla. Le steroid inamandla okusetyenziselwa amanyathelo okuthintela inzala abesilisa. I-steroid ibangela ukungoneli kwethutyana emadodeni ukuba ilawulwa ngamanani aneleyo.
I-Trestolone Acetate (MENT) (6157-87-5) kukholelwa ukuba inamandla kangangezihlandlo ezilishumi kune testosterone, kwaye ngenxa yoko, ifumene igama elihle iminyaka emininzi. Ilawulwa ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nomgubo okanye inaliti. Le steroid iluncedo ngakumbi kubazinikezeli bomzimba abazimiseleyo abanqwenela ukufumana iziphumo ezifanelekileyo ngokudibanisa i-steroid kunye nerejimeni yokomelela kokutya kunye nezixhasi.
I-2.Isebenza njani iTrestolone Acetate?
I-Trestolone Acetate (MENT) I-CAS 6157-87-5 inceda abakhi bomzimba ukwandisa ubunzima bemisipha kunye nokunciphisa amanqatha ngexesha elifanayo. Ukufezekisa iziphumo ezifanelekileyo, le steroid inokudityaniswa namanye amandla okuqinisa kunye nokusika komzimba. I-steroid ibangela ukungabi namntwana okwethutyana ngokuthintela ukukhutshwa kwe-gonadotropins kwi-pituitary gland.
I-steroid ikwathintela ukukhutshwa kwe-gonadotropins, i-follicle evuselelayo yehomoni, kunye ne-luteinizing hormone kwanakwiqondo eliphantsi. I-Follicle ivuselela i-hormone (FSH) kunye ne-Luteinizing hormone (LH) ziyafuneka kwinkqubo ye-spermatogenesis, inkqubo evivinya ngayo ivelise i-spermatozoa.
Xa ukukhutshwa kwe-LH kunye ne-FSH kuthintelwe, i-spermatogenesis ayithathi. Ukunyanzela i-LH kuphazamise ngakumbi ukuveliswa kwesidoda kunye nokuveliswa kwe-testosterone, ngenxa yoko ukungabinakho ukuzala. I-MENT powder lulutho olululo lokubuyisela endaweni uninzi lwemisebenzi exhomekeke kwi-androgen. Ukuhlaziywa okujongeyo kwe-Superdrol (i-Methasterone) yokwakha umzimba
I-3.Izixhobo zeTrestolone Acetate (MENT)
Ngokungafaniyo nezinye i-anabolic steroids ezityala ukuthandwa kwabo bathengisi abamnyama okanye ngaphezulu kweenkampani ezongezayo, iTrestolone Acetate iyazenzela igama kwezempilo, uphando lwenzululwazi ludumisa kakhulu phakathi koluntu olwakha umzimba. I-MENT yaveliswa okokuqala kwii-1960s
Kutshanje, iskali, inkampani esekwe kuphando lwamayeza kunye neBhunga labahlali baye bavelisa umdla wokuvelisa le steroid kulandela uphando lwabo kule steroid ngeenjongo zonyango lokulawulwa kokuzalwa kwamadoda kunye nokutshintshwa kwehomoni. Ezi nkampani zifumene iimpawu ezahlukileyo kunye ne-steroid efanelekileyo yokwakha umzimba. Ngaphandle koko, le steroid iluncedo ngokubanzi kunyango lwe-androgen.
Ngaphandle kokucwangciswa kokuthintela ukukhulelwa kunye nonyango lwe-androgen kunye nokuthintela ukukhulelwa, njengokulungiselela kwe-intramuscular okanye njenge-transdermal, kukho ezinye i-Trestolone Acetate (IXESHA) Sebenzisa ukubandakanya kwi-hypogonadism eyintloko, ulusu, ukulahleka kwamathambo, umhlaza we-Prostate, ukusilela kwe-testic, i-BHP, i-ASIH, isarcopenia, i-cachexia kunye nokuchitheka kwezihlunu kunye nokuphucula ezemidlalo kunye nokwakha umzimba.
I-4.Trestolone Acetate (MENT) umthamo
Ukusukela ekubeni i-MENT ayithengiswanga njengechiza, azikaze zenziwe ezithile I-dosage ye-Trestolone Acetate (MENT) izikhokelo ze-steroid. Ukuba yi-steroid enamandla kakhulu, iidosi ezincinci ziya kusebenza kubakhi bomzimba. Olunye uphononongo lubonisa ukuba iyeza elinamandla okuphindwe kalishumi kune-testosterone kwaye inyanzela i-spermatogeneis amaxesha angamashumi amabini ukuba asebenze ngakumbi kune-testosterone.
Ngenxa yoko, iidosi ezingaphantsi kwe-10mg (i-3-16mg) yemihla ngemihla ziya kusebenza kubantu abaninzi abaqalayo. I-injeke esekwe kwioli ngeli liyeza lingathatyathwa malunga ne-10-20mg ngamathuba amabini kwiintsuku ezintathu. Abanye abantu banokuthi bathathe iidosi ezingaphezulu kwe-10mg ngemini yeziphumo ezilungileyo zeTrestolone Acetate (MENT) kuba ukusebenza kwechiza alifani kubo bonke abantu.
Abantu abohlukeneyo banamaqondo ahlukeneyo okuba nemvakalelo yokufumana iziyobisi kwipropathiyini kunye neproprogen. Iidosi eziphezulu nangona kunjalo azikhuthazwanga kuba zinokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu.
Abasebenzisi abanamava beTrestlone banokusebenzisa imithamo ye-20-50mg yonke imihla. Nangona kunjalo, oku kunokwahluka kuxhomekeka kuhlobo oluthathwa ngalo. Umzekelo, ifom enokubanjiswa inokuba sezantsi kancinci kuneendlela zokuhambisa kunye zomlomo. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, eli chiza alilawulwa ngomlomo; Inaliti kunye nezisombululo ze-transdermal ziyacetyiswa njengezona ndlela zokuthatha eli chiza. Ukuphelisa i-estrogen kunye neepractactin iziphumo ebezingalindelekanga, kuyacetyiswa ukusebenzisa i-steroid ene-prolactin inhibitors ezifana neCabergoline kunye ne-aromatase inhibitor enjengeArimidex.
Abanye abasebenzisi abanamava banokuthatha iidosi ze-50-75mg yonke imihla kumjikelo weeveki ze-4. Aba basebenzisi kufuneka bahlule umthamo ube ngamacandelo amabini, oko kukuthi, ngaphambi kokulala kwaye omnye emva kokuvuka. Iingcali zinokuthatha imithamo ukuya kuthi ga kwi-75-100mg. Idosi enjalo inokwahlulwa kubini, njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ngaphambi kokulala okanye ebusuku- 25mg
Indlela ebanzi iyimfuneko xa uphantsi komthamo weTrestolone Acetate kunye neziphumo ezifanelekileyo. Omnye, ke, kufuneka ugcine ukutya okufanelekileyo kokupheliswa kwamafutha kunye nokongeza umsipha. Kubalulekile ukugcina inkqubo esebenzayo yokusebenza kunye nokusetyenziswa okungaguqukiyo okulandela iziphumo ezichanekileyo zedosi kwiziphumo ezifanelekileyo kunye nokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga.
I-5.Trestolone Acetate (MENT) isiqingatha sobomi
Ubomi be-steroid esisiqingatha sobomi kubhekisele kwixesha elithathwe ngumzimba ukwamkela iyeza kwaye liphelise malunga nesiqingatha sesixa esithathiweyo. I-Trestolone Acetate isiqingatha sobomi esusela kwiiyure ezisibhozo ukuya kwishumi elinambini (iiyure ze-8-12).
Ngenxa yoko, umntu unokuthatha iyeza kwiidosi ezincinci imini yonke, oqinisekisa ukuba likho rhoqo egazini. La machiza anokuthatyathwa ngamakhefu amabini okanye amathathu ngosuku. Ngenxa yokuhluka okujingeneyo kwesiyobisi egazini, kubalulekile ukuba abasebenzisi bayokwazi ukubala isiqingatha-sobomi sechiza. Oku kuyakunceda umsebenzisi ekusetyenziseni iyeza kwiidosi ezichaziweyo.
Ukuba, umzekelo, omnye uthatha isigqibo sokuthatha i-50mg ngemini, kumjikelo weeveki ezine, kwaye phantsi kwengcinga yokuba ichiza linesiqingatha sobomi be-8hours, umahluko wegazi unokuba ngolu hlobo lulandelayo:
Kule dosi, umntu unokuthatha iyeza kwizithuba ze-8-ngeyure ze-25mg nganye. Ukuba umthamo uqala kwi-6 AM, uxinzelelo luya kuba yi-12.5mg emva kweeyure ze-8 (2 PM) xa kuthathwa ithamo lesibini. Idosi yesibini iqukethe i-25mg, eya kuphakamisa uxinzelelo kwi-37.5mg.
Iiyure ezisibhozo emva kwedosi yesibini (10 PM), uxinzelelo luya kuba yi-18.75mg. Iiyure ezisibhozo, kamva, iya kuba yi-6 AM yosuku olulandelayo, xa kuthathwa idosi yokuqala yolo suku. Oku kuthetha ukuba idosi yokuqala yomhla wesibini iya kwenziwa xa umzimba une-9.4mg ukusuka ngosuku lwangaphambili.
Ipatheni enjalo iqinisekisa ukugxininiswa rhoqo kwe-steroid egazini ngaphambi nasemva kokusebenza. Ukwazi ukubala i-Trestolone Acetate (MENT) isiqingatha-sobomi sechiza kunceda abasebenzisi ukuba baqinisekise ukuba uxinzelelo lwechiza luphezulu kakhulu ngexesha elinobunzima kakhulu, ngaphambili, ngexesha nasemva kokusebenza. Ukubala ngokuchanekileyo iTrestolone Acetate (MENT) isiqingatha sobomi kunceda umsebenzisi ukuba alawule idosi kwaye afezekise iziphumo ezizizo.
Abantu abohlukeneyo banokusebenzisa imijikelezo eyahlukeneyo xa kuziwa ekuthatheni iTrestolone Acetate. Oku kuya kuxhomekeka ikakhulu kumava akho kwelinye ichiza. Omnye kufuneka aqonde iimpembelelo zomjikelo abangena kuwo, ngokuxhomekeka kwiinjongo zabo kunye neenjongo zabo ngaphambi kokuzibophelela kuwo nawuphi na umjikelo.
Xa ungena kumjikelo, kubalulekile ukuba uqwalasele ubude bomjikelo kunye nokuxinzezeleka kwechiza kwigazi kuwo wonke umjikelo. Ngeenjongo ezimiswe kakuhle, kulula ukukhetha ezona zifanelekileyo Umjikelezo weTrestolone Acetate (MENT) ukuzibophelela ku. Nge-Trestolone Acetate, kunokwenzeka ukuba ufumane iziphumo ezibalulekileyo kunye nomjikelezo weeveki ezimbini. Nangona kunjalo, owona mjikelo ofanelekileyo kufuneka uqhubeke iiveki ezine ukuya kwezintandathu. Lo ngumjikelo ofanelekileyo kuba uthintela umntu ekunyukeni idosi yabo.
I-7.Trestolone Acetate (MENT) iziphumo
I-Trestolone Acetate yi-steroid enamandla kakhulu efumene ukuthandwa ngenxa yeziphumo zayo zamandla. Enye yeempawu, kutheni abantu abaninzi beyithatha le steroid, kungenxa yokuba ziziphumo zayo ezibonakalayo ngaphakathi kwexesha elifutshane kakhulu. Ichiza linomphumo onamandla kubantu abafuna ukufikelela ngokukhawuleza ukuphuculwa kwamandla.
Abaqalayo ukusebenzisa eli chiza banokufumana iziphumo ezibonakalayo kunye nje ezimfutshane iiveki ezimbini bengafakwanga. Kwi-potency yayo ephezulu, abasebenzisi banokufumana ukuzuza okumangalisayo kwemisipha kunye neziphumo zokulahleka kwesisindo kunye nethamo elincinci le-3-6mg. Iziphumo zokufumana izihlunu zihlala ixesha elide, ezenza ukuba iimbaleki kunye nabaphakamisa ubunzima baqwalasele kakhulu eli chiza.
Abantu abaqhelekileyo ngaphandle kwabakhi bomzimba banokusebenzisa eli chiza ukufezekisa umzimba onomtsalane. Ezi ziphumo zinokuphuculwa ngokugcina i -outout elungileyo yokusebenza kunye nokutya okufanelekileyo. Ichiza elinika abasebenzisi amandla angaphezulu kokusebenzisa, okufuna iphango.
Isakhono se I-Trestolone i-Acetate powder Ukucinezela ukukhutshwa kwe-steroid ukulawula inkqubo ye-spermatogenesis yenza ukuba ichiza libe luncedo kulawulo lokuzalwa lwamadoda.
I-Trestolone Acetate ibonelela ngesiyobisi esiluncedo kubantu abanomdla wokusika. Ukusika i-Trestolone Acetate (MENT) kwenza abantu abaphakamisa ubunzima kunye nabakhi bomzimba ukunciphisa amafutha amaninzi kwimizimba yabo ngaphandle kokufumana ubunzima obukhulu kwimisipha yabo. Ukufezekisa ubunzima obunobunzima bomzimba obumangalisayo, iTrestolone Acetate ingasetyenziswa kunye namanye amayeza ukunyusa iziphumo kumjikelo wokusika weTrestolone Acetate (MENT) ngokuxhomekeke kwiziphumo ezinqwenelekayo kunye nokuziva komntu kunye nobuthathaka be-oestrogenic.
Ukusika izigaba zeTrestolone, umntu unokufaka i-Winstrol nge-androgen-aromatizing kunye nee-androgen ezinjengeHalotestin okanye i-trenbolone. Umdibaniso onjalo uya kunceda umntu ukuba afezekise inkcazo eqinileyo yomzimba kunye nokuqina kobudoda obufunwa ngabakhi abaninzi bomzimba ukufezekisa. Abantu abanovakalelo oluphezulu banokucinga ngokufaka ii-compounds ezinjenge-Deca-Durabolin, i-Equipoise okanye i-primobalin xa kufakwa i-Trestolone acetate.
I-9.Trestolone Acetate (MENT) yobuninzi
I-Trestolone nayo ingafakwa kunye nezinye i-steroids zokuxhuzula. I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder bulking ijolise ikakhulu kubantu abafuna ukufumana ukwanda kwezihlunu zemisipha, ukuhlala bekwenza oko noqeqesho olucwangcisiweyo kunye nokusebenza. Ubukhulu becala, iinzame zokunciphisa amanqatha omzimba kunokukhokelela ekuqeqesheni ukugqithisela okunga khokelela ekuphulukaneni nomsipha. I-Trestolone, xa idityaniswa kunye nee-steroid ezifanelekileyo, zinokwenza kube lula ukuba umntu alahlekelwe ngamafutha omzimba, agcine kwaye aququzelele ukufunyanwa kobunzima bemisipha kwaye enze umzimba ube namandla kunye namandla okunyamezela nokusebenza nzima.
Ukuxhaphaza ngamanye amaxesha kunokuba nzima kakhulu kubantu abafuna ukufikelela kwiziphumo ezikhawulezayo ngexesha elifutshane kakhulu. Imijikelezo enjalo yokuxhuzula inokunika umsebenzisi isixa esona sikhulu sokubambisa, okubandakanya ukugcinwa kwamanzi. Ezi ziphumo zinokuthi, nangona kunjalo, azihlali ixesha elide. Ezinye zee-steroids ezinokufakwa kwiTrestolone Acetate (MENT) kumjikelo wokubaninzi ziquka i-Dianabol, Anadrol, neTrenbolone.
I-Dianabol yenye yeepilisi ezithi ziqwalaselwe kakhulu kuninzi ngokubanakho ukwenza ngokukhawuleza kwaye zinike inzuzo ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. I-Stacking Trestolone ene-Dianabol inokubangela ukuya kwi-20 iipawundi zesisindo semisipha kwiiveki ze-6. I-Dianabol nayo inenzuzo kuba ine-denser kunye ne-bulky masses ngaphandle kwezitofu.
I-Deca-Durabolin, ekwabizwa ngokuba yiNandrolone, isetyenziselwa ukuxhaphaza abantu abafuna ukukhawuleziswa okuhlanganyelweyo kunye nokuvuselela izihlunu. Kukwaluncedo kunyango lwasemva komjikelo kuba kunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Le steroid ineziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa kwaye zinokusetyenziswa kunye kunye nee-androgenic steroids ezifana ne-Dianabol.
I-Trenbolone inamandla alinganayo kunye ne-potency kwaye isetyenziselwa umjikelezo wobuninzi bomzimba onqabileyo njengokusika. Nangona inamandla aphezulu, isenokungabi luncedo kubaakhi bomzimba osindayo abalungiselela ukhuphiswano. Inako, nangona kunjalo, ibotshelelwe kuwo nawuphi na umjikelo wokubaninzi.
Izibonelelo ze10.Trestolone Acetate (MENT)
I-Trestolone acetate ime ngaphandle kwimarike ngenxa yesikhundla sayo esiqinisekiswe ngabahlalutyi bezonyango kwaye saziwa ngokuqina komgangatho. I-Trestolone acetate ineentlobo ezahlukeneyo zezibonelelo, ngakumbi abantu abafuna ukugqibezela imizimba yabo kunye nokufezekisa iinjongo zabo zokuqina. Yeyona nto iphakanyiswayo ekuncedeni ukukhula kwemisipha kunye nokunciphisa umzimba. I-steroid ivumela abasebenzisi bayo ukuba bafumane umzimba ozondelele, ohlonelwayo ngokufumana izihlunu ezikhulu. Ezinye eziphambili Izibonelelo zeTrestolone Acetate (MENT) ezinxulumene neTrestolone acetate zibandakanya:
· I-Trestolone acetate iyaziwa ukuba isebenza ngokukhawuleza kunezinye ii-steroid. I-Trestolone acetate ihambisa iziphumo kwangoko emva kwenaliti. Abasebenzisi banike ingxelo yotshintsho oluphawulekileyo kwimisipha yomzimba emva kokuba bethathe idosi. Kuyamangalisa, ukuba iziphumo zayo zihlala ixesha elide, kwaye abasebenzisi akufuneki bakhathazeke malunga nokuzifaka kwakhona ukuze bagcine izihlunu zabo. Iyeza lenza izihlandlo eziphindwe kalishumi ngaphezulu kwefuthe le-myotopic ye-testosterone eyenza ukuba yandise izinga layo lokwakha izihlunu eziphezulu kunayo nayiphi na enye i-steroid kwintengiso.
· I-Trestolone acetate ingasetyenziswa njengechiza elingelinye lokusika kwaye izakhono zalo zokwenza ukusikwa ziphuculwe kakhulu. Eli chiza linezinto ezizodwa ezinje ngokufakwa kwezinye iiprormorm ezinceda ekuphuculeni umjikelo wokusika, ke loo nto isebenze ngcono kumntu ofuna ukukhupha izicubu kunye nokutshisa amanqatha.
I-Trestolone acetate ingqineke iluncedo kwimijikelezo exineneyo. Amachiza avumela umsebenzisi wawo ukuba abe ne-nitrogen ephezulu yokugcinwa kwamanqanaba okuwanceda ukuba akhulise ukwakheka kwezihlunu. Iyeza likwaphucula nabakhi bomzimba bagcina imeko ye-anabolic yemizimba.Isikhokelo esiphezulu seNolvadex ukunyanga umdlavuza webele
Ukusetyenziswa kweTrestolone acetate kwandisa amandla omzimba ekuqulunqweni kweeproteni. Ngenxa yoko, ichiza likhupha ukukhula okukhawulezileyo kwezicubu zomzimba kuba iiproteni zisebenza njengeebhloko zokwakha zomzimba.
Isiyobisi sikwenyusa nenqanaba lamandla. Ukunyusa inqanaba lamandla kunceda abasebenzisi ukuba baphuhlise amandla oqeqesho ngakumbi kwaye lide. Ngapha koko, ukunyusa amanqanaba omzimba kunceda abakhi bomzimba ukuba banqamule ikhefu, oku kubanceda ukuba basebenze rhoqo.
· Ngokungafaniyo nezinye iziyobisi, trestolone Acetate akaguquki kwi-estrogen. I-estrogen ineziphumo ezonakalisayo emzimbeni wenye indoda, njengokubangela ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, ukudinwa, kunye nokupheliswa kwezihlunu. Nangona kunjalo, i-MENT yakuba ithathiwe idlala indima ye-testosterones emzimbeni wabasebenzisi kwaye ngaloo ndlela isindisa iziphumo ezibi ze-estrogen.
· Kwakhona, ngokungafaniyo nee-steroid ezininzi, ichiza aliguquli kwi-DHT. Kwakhona, i-steroid inyuse i-potency njengoko ingabopheleli kwi-sexbulin ye-sex-binding yesondo (SHBG).
11. Uvavanyo lweTrestolone Acetate (MENT)
I-Trestolone Acetate ihlala yaziwa njenge-anabolic steroid enamandla kakhulu kwaye isebenzayo. Abantu abaninzi basebenzise i-Trestolone Acetate ukwakha iziyobisi emzimbeni wokwakha izihlunu kunye nonyango. Abantu abanjalo bavakalise ulwaneliseko lwabo ngechiza ngokujonga kwakhona abathengi. Oku kulandelayo zezinye zokuhlolwa komsebenzisi okubhalwe ngabasebenzisi abanjalo:
U-Nick ngumakhi womzimba oneminyaka eyi-27 kwaye ungumsebenzisi we-Trestolone powder wokwakha umzimba. UNick usebenzise le mveliso kwiinyanga ezisibhozo, kwaye uyavuya ziziphumo. Utsho esithi ichiza limnike iziphumo kanye njengoko ebefuna. UNick uyaqhubeka nokufumana ubunzima bemisipha ngaphandle kwemiphumo emibi. Uyonwabile into yokuba ichiza lingamnikanga ilahleko yokutya, imo yokutshintsha kwemozulu. Eyona ngxaki uNick ahlangabezana nayo yile steroid kukubila ebusuku kunye nokuqaqanjelwa sisifo esithile. Waye ngumakhi womzimba we-veter, uNick wayesetyenziswa kula macala kwaye engabafumani uxinzelelo.
UGreg ngomnye umsebenzisi owonwabileyo weTrestolone yokwakha umzimba. UGreg ebesebenzisa eli chiza kwaye okwangoku uphakathi nomjikelo wakhe wesibini emva konyango lomjikelo weposi. Kumjikelo wakhe wesibini, ubenokubaninzi, kwaye iziphumo zihamba phambili. UGreg ucwangcisa ukuqala ukusika kamsinya nje emva kokuba ephelile ngalo mjikelo. UGreg uthi wayengaxoli ekuqaleni kwaye wayenoloyiko lokuba ichiza liza kuba neziphumo ezibi emzimbeni wakhe. Okothusayo kukuba iyeza lajika laba lelona enye yeyona mveliso ibalaseleyo. Iyeza lamnika amandla aphakamileyo, umzimba oqaqambileyo, kwaye umenze wakwazi ukwakha izihlunu ezikhulu. UGreg unekratshi ngesiyobisi kwaye uthi angacebisa nabani na.
UClinton uziva echukumisekile ukuba abelane ngamava akhe kunye neTrestolone Acetate kwiziphumo ezilungileyo azifumeneyo kwithuba nje elifutshane kunye neeposenti ezincinci zeli chiza. UClinton akanguye umntu ophakamisa ubunzima okanye ongezakhi mzimba kodwa ungumyili wemfashini onomdla wokomelela komzimba omelele kunye nokuqina komzimba. Usebenzise eli chiza phantse unyaka, kwaye onwabile kukuba ngaphandle kokufumana izihlunu ezomeleleyo kunye nomzimba ojongeka kakuhle, iyeza lamnceda ukuba aphucule i-libido, impilo entle kunye nolusu. Iyeza lamnceda ukuba anciphise amanqatha omzimba, amenza onwabe kakhulu. UClinton unqwenela ukuqhubeka nokusebenzisa eli chiza kuba yena eneengxaki kwaye engenalo.
I-12.Trestolone Acetate (MENT) ipowder iyathengiswa
Abavelisi beTrestolone Acetate baqinisekisile ukuba imveliso ikumgangatho ophezulu. Nangona kunjalo, baninzi abantu kwimarike emnyama kunye neelebhu eziphantsi komhlaba abathengisa imveliso ekumgangatho ophantsi kunye namaxabiso aphantsi. Ukuthatha i-Trestolone Acetate ekumgangatho ophantsi kunokubangela iziphumo ezibi ezinje ngomhlaza webele. Ke, abathengi kunye nabasebenzisi bale mveliso kufuneka balumke ngelixa bethenga I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder iyathengiswa.
Ngenxa yokuthandwa kwayo kunye nokwanda kwenani labantu abaxabisekileyo nabanomdla wokufezekisa impilo yomzimba, iyeza lifumaneka kwiindawo ezahlukeneyo. Inzuzo eyongeziweyo yesiyobisi kukuba ifumaneka ngexabiso elifanelekileyo kunezinye i-steroid. Kubathengi abajonge ukuthenga i-powder ngobuninzi bokufikelela kwimveliso ngexabiso eliphantsi. Imveliso ithengiswa kwiinguqulelo ezimbini, ezizezo zixube ioyile emsulwa kwi-100mg / ml kunye ne-99% yeTrestolone Acetate powder efanelekileyo.
13. Ungayithenga phi i-Trestolone Acetate (MENT) powder
I-Trestolone Acetate iyafumaneka kubathengisi bamazwe aphesheya abafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela njenge China, United States, Canada, Brazil, neMexico. Aba bathengisi bamazwe aphesheya benze ukuba eli chiza lifumaneke kwiiwebhusayithi zabo ukuze abathengi balithenge kumaqonga abo.
Kwakhona, unako Thenga i-Trestolone Acetate (MENT) umgubo kwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi ngamaxabiso afanelekileyo, Omnye unokuthenga i-Trestolone Acetate (MENT) ngobuninzi kubathengisi balapha kodwa uyalumkiswa ngokujonga umgangatho ngelixa uthenga imveliso yalapha ekuhlaleni njengendawo yomgunyathi ithengise imarike. Abathengi bahlala benyanzelekile ukuba bathenge imveliso kwiiwebhusayithi zeenkampani ezimiselweyo endaweni yokufumana ezinye izinto kwi-Intanethi, kwaye Umthengisi weTrestolone Acetate (MENT) Ukuqinisekisa ukuba bafumana imveliso esemgangathweni.
I-Trestolone ifumene udumo oluthembekileyo kakhulu ekwakheni umzimba kunye nezinye iinjongo zonyango, njengokucwangcisa kwamadoda. Eli chiza lihlala libe yeyona nto inamandla kwi-steroid kwintengiso kunye nokuduma kwayo okubangelwa yi-potency yayo ephezulu. Eli chiza lineenzuzo ezininzi kubasebenzisi, kwaye ziluncedo kakhulu. Abasebenzisi beli chiza kufuneka bagcine iishedyuli zabo zedosi, ukubalwa kwesiqingatha sobomi, kunye nokugcinwa rhoqo kokusebenza kunye nokutya okufanelekileyo. Ukuba ufuna ukuthenga iTrestolone yokwakha umzimba, ungandwendwela iwebhusayithiasas.com ukubeka iodolo yakho kwaye ubuze ulwazi oluthe kratya.
1. UDrake Ellen, uDrake Randy; I-Saunders Pharmaceutical Word, (2006) p.682
2. I-Elks; Isichazi-magama sesiyobisi; Idatha yekhemikhali: Idatha yeChemical, amaLungiselelo, kunye nebhayibhile. (2014) p.538, 588
3. Legato Marianne; Imigaqo yoNyango-oluchaziweyo ngeSini, (2009) p.363
4. UYalkowsky uSamuel, u-Yan, uJain Parijat; Incwadana yedatha yolwazi lokuguquguquka kobomi, (2016) P. 1567
5. UZayas Hilda; I-Spanish Chemical & glossary yeGqirha, (2005). P. 268